တပ်မတော် ဘယ်လို ဖယ်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ရှေ့ဆက်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားလဲ ? | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အစီအစဉ်များ မှတ်သားစရာ ပြောစကား တပ်မတော် ဘယ်လို ဖယ်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ရှေ့ဆက်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားလဲ ?
တပ်မတော် ဘယ်လို ဖယ်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ရှေ့ဆက်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားလဲ ?
● တပ်မတော်အနေနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ဒရယ်စနစ်မျိုးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကို ထူထောင်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဌ ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦးက တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
● ဒီလိုပြောကြားရာမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အခြေအနေချင်း ဆင်တူတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဖယ်ဒရယ်စနစ် အခြေခံတွေကို ဥပမာပေးပြီး ပြောကြားခဲ့သလို မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြစ်ဖို့ ဆွေးနွေးမှုကနေပဲ အဖြေရနိုင်မယ်လို့လည်း ပြောကြားခဲ့တာပါ။
● ဒါ့အပြင် လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ရှေ့မဆက်နိုင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းတွေနဲ့အတူ EAO လို့ ခေါ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ ထားတဲ့ သဘောထားတွေအပေါ် တပ်မတော်ရဲ့ အမြင်တွေကိုပါ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
● အပြည့်အစုံကို အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဥက္ကဋ္ဌဌ ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ် စိုးနိုင်ဦး ပြောကြားခဲ့တာတွေထဲက ထုတ်နှုတ်ပြီး MCN သတင်းဌာနရဲ့ Quote Of The Day အစီအစဉ်ကနေ ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
● တပ်မတော်အနေနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ဒရယ်စနစ်မျိုးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကို ထူထောင်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦးက တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
● အပြည့်အစုံကို အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ် စိုးနိုင်ဦး ပြောကြားခဲ့တာတွေထဲက ထုတ်နှုတ်ပြီး MCN သတင်းဌာနရဲ့ Quote Of The Day အစီအစဉ်ကနေ ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Previous articleလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို သက်ညှာမှု မရှိ၊ တာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ တပ်မတော် အရေးယူမယ်
Next articleAA ရဲ့ ဖမ်းဆီးမှု ခံခဲ့ရသူတွေထဲက ၁၄ ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ဟု တပ်မတော် သတင်းထုတ်ပြန်